Search ဖူးကား၂၀၂၀ - BajarFB.com
Search Results - ဖူးကား၂၀၂၀
အခြေနေခြင်းမတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းကြတဲ့အခါ ဖိနှိပ်မှုတွေကိုခံရသူက သည်းခံခြင်းတွေနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ရင် ရေရှည်လက်တွဲနိုင်မလား . . . ဒါမှမဟုတ် ခံစားရသမျှတွေကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပေါက်ကွဲပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရော ထူထောင်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကရှေ့ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလား ဆိုတာကတော့ . . . SKY NET Cinema (Pay-Per-View) မှာ (၂၈.၈.၂၀၂၀) မှ (၃.၉.၂၀၂၀) ထိ ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . . "မေတ္တာမိုး" ဒါရိုက်တာ - မောင်မောင်ဦး (စနိုးဝှိုက်) အောင်ရဲလင်း၊ မေသဇင်အောင် SKY NET Cinema 21 Aug 2020 · 6.3M views
စင်္ကာပူ (၁၉၆၅-၂၀၂၀) General Knowledge MKT9Jan · 669 views
ဆေးလက်မှတ် မရှိဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေကို ထူးခန့်ကျော် ဘာပြောလဲ
ဆေးလက်မှတ် မရှိဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေကို ထူးခန့်ကျော် ဘာပြောလဲ (ရုပ်/သံ) ဧရာဝတီ ၊ သြဂုတ် ၂၄ ၊ ၂၀၂၀ ။ “တိုင်းရင်းဆေး လက်မှတ်လုပ်ဖို့ ကျနော့်ကို ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ နဂိုကတည်းက ကျနော့်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ လက်မှတ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အခုလို ရောဂါတွေ ကုသတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အသပြာတခုတည်း ကြည့်ပြီး ကုလို့ မရဘူး။ မိသားစု စိတ်ဓာတ်နဲ့ မေတ္တာထားပြီးကုသရတာ။ တချို့တွေက ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက် ဆေးကုတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားကို သူတို့စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး ကလိကလိ ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါရဲ့”လို့ သရုပ်ဆောင် ထူးခန့်ကျော်က ပြောပါတယ်။ အင်တာဗျူး - ချစ်ပိုး ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - သက်ပိုင်စိုး The Irrawaddy Lifestyle 24 Aug 2020 · 943K views
၂၀၂၀ ဆယ်တန်းအမှတ်စာရင်း ကြည့်နည်း Crd
၂၀၂၀ ဆယ်တန်းအမှတ်စာရင်း ကြည့်နည်း Crd ဆယ်တန်းအမှတ်စာရင်းနှင့် အောင်လက်မှတ် ဝန်ဆောင်မှု 14 Jan · 21K views
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟ ရိုက်ကူးပြီး 🎥🎥 သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် ၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ဂျိုကာ ၊ အိချောပို ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ''ဟောက်စား '' ဇာတ်ကားကြီးကို အောက်တိုဘာလ (၂၃.၁၀.၂၀၂၀) မှ (၂၉.၁၀.၂၀၂၀) ထိ SKY NET CINEMA (Pay-Per-View) မှာ 📡📡 ထုတ်လွှင့်ပြသပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော် ကြည့်ရူ့အားပေးပါနော်. . သက်ဆိုင်ရာ RSP များ၊ SHWE BANK Mobile Banking, OK$ Mobile App ၊ Easy Pay Mobile Money ,CB Pay App များနှင့် နီးစပ်ရာ G&G Convenience Store ဆိုင်များတွင်(၂၄)နာရီဝယ်ယူကြည့်ရှု နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (Customer များအားလုံးလည်း မိမိကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီး Covid-19 ကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။) SKY NET Cinema5Oct 2020 · 186K views
Ending Again (2020) Teaser တောင်းဆိုထားတဲ့ကားလေး တင်ပေးပါမယ်နော် ၂၀၂၀ မှာပဲ ထွက်ထားတာပါ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရည်းစားဟောင်းက ထားသွားပြီးတဲ့နောက် လက်မထပ်ချင်တော့တဲ့ အာယောင်းဟာ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် လက်ထပ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ် အဲဒီတော့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပဲ ပြန်အဆင်ပြေမလား နောက်မှမထင်မှတ်ပဲတွေ့ခဲ့တဲ့ ယွန်းဆူနဲ့ပဲ အဆင်ပြေမလားဆိုတာ ဆက်ကြည့်ပေးကြပါနော် အပိုင်း ၁၂ပိုင်းပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ၁ပတ်ကို ၃ပိုင်းတင်ပေးသွားပါမယ်နော်
Ending Again (2020) Teaser တောင်းဆိုထားတဲ့ကားလေး တင်ပေးပါမယ်နော် ၂၀၂၀ မှာပဲ ထွက်ထားတာပါ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရည်းစားဟောင်းက ထားသွားပြီးတဲ့နောက် လက်မထပ်ချင်တော့တဲ့ အာယောင်းဟာ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် လက်ထပ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ် အဲဒီတော့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပဲ ပြန်အဆင်ပြေမလား နောက်မှမထင်မှတ်ပဲတွေ့ခဲ့တဲ့ ယွန်းဆူနဲ့ပဲ အဆင်ပြေမလားဆိုတာ ဆက်ကြည့်ပေးကြပါနော် အပိုင်း ၁၂ပိုင်းပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ၁ပတ်ကို ၃ပိုင်းတင်ပေးသွားပါမယ်နော် Mini Drama Collection - MDC4Sep 2020 · 43K views